December 2020 - Achawlaymyar
ကိုယ်နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့လူတွေမှာ စိတ်နှောင့်အယှက်ကြောင့် ပူလောင်ရတဲ့အခါ….
December 30, 2020 by Achawlaymyar
စိတ်နှောင့်အယှက်ကြောင့် ပူလောင်ရတဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့လူတွေမှာ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေ၊ သူတို့ရဲ့အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုတွေက ကိုယ့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာတွေကြုံကိုကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနည်းဆုံးတော့ စိတ်ထဲမှာ တော်တော်လေး ကသိကအောက် ဖြစ်သွားတယ်? စိတ်ထဲမှာ မကျေမချမ်း ဖြစ်သွားတယ်? ဟုတ်တယ်ဟုတ်? ဒီလူတွေကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြလဲ?။ ဦးကျော်ဟိန်းဇာတ်ကားထဲကလို မီးကိုမီးနဲ့ ငြှိမ်းပစ်မယ်ဆိုပြီး ချက်ချင်းပဲ ခက်ခက်ထန်ထန်ပြန်ပြီး ဆက်ဆံသင့်လား။ အဲ့လို ချက်ချင်းမဆင်မခြင် တုံ့ပြန်တာက တကယ့်အရှုံးသက်သက်ပါ။ တစ်ခုသတိထားရမှာက ကိုယ့်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ထင်နေတဲ့ လူတွေထဲမှာ ကိုယ့်ဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့သူတွေလည်းပါနိုင်သလို အရေးမပါတဲ့သူတွေလည်းပါနိုင်ပါတယ်။ ဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့သူတွေဖြစ်ဖြစ် မပါသူတွေဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံးစိတ်ထားပေးနိုင်ရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးက အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က စိတ်မထားတတ်ပဲ မကျေနပ်မှု စိတ်အစိုင်အခဲလေးတွေ များလာမယ်ဆိုရင် တစ်ချိန်ချိန်တော့ သူတို့နဲ့ ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မခေါ် … Read more
ချိန်းတွေ့နေသော အတွဲများကို နှာခေါင်းစည်းများ တပ်ထားရန်နှင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပူးကပ်မနေဘဲ ခပ်ခွာခွာနေရန် သတိပေးပြောကြား
မိတ္ထီလာ ကန်စောင်းတွင် ချိန်းတွေ့နေသော အတွဲများကို နှာခေါင်းစည်းများတပ်ထားရန်နှင့် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ပူးကပ်မနေဘဲ ခပ်ခွာခွာနေရန် လိုက်လံ သတိပေးနေသည် ကို တွေ့ရစဉ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိတ္တီလာမြို့နယ်မှာCovid19 ရောဂါကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကိုအားကစားနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေး ခရိုင်/မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များလူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့အစည်းများမှသက်ဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးဌာနဝန်ထမ်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍နေ့စဉ်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ပြီးနေ့မအားညမနားဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်Covid 19 ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရုံမျှမကမြို့နယ်အတွင်းရာဇဝတ်မှုခင်းများ မဖြစ်ပွားစေရေးအတွက်နေ့/ညလှည့်ကင်းများဖြင့်နယ်မြေစိုးမိုးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ရာဇဝတ်မှုခင်းများဖြစ်သောလူသတ်မှု လုယက်မှုများဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည့်မိတ္တီလာကန်ပတ်လမ်းတစ်လျှောက်နေ့လှည့်ကင်းများဖြင့်လှည့်လည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာရောဂါ ကာကွယ်ရေးညွှန်ကြားချက်များကို ဆန့်ကျင်၍နေအိမ်များအတွင်းနေထိုင်ခြင်း မရှိပဲ အရက်ဝိုင်းဖွဲ့သောက် သူများ သမီးရည်းစားစုံတွဲများအားတွေ့ရှိ၍ လိုအပ်သည်များစစ်မေးကာရောဂါကာကွယ်ရေးညွှန်ကြားချက်များရှင်းလင်းပြခြင်း မှုခင်းအသိပညာပေးခြင်းများအားနားလည်သည်အထိရှင်းလင်းပြောပြပြီးနေအိမ်များသို့ပြန်လ်စေလွှတ်ခဲ့ေ ကြာင်းသိရသည်။ရွှေမောင်မောင်(မိတ္တီလာ) Unicode, မိတ်ထီလာ ကနျစောငျးတှငျ ခြိနျးတှနေ့သေော အတှဲမြားကို နှာခေါငျးစညျးမြားတပျထားရနျနှငျ့ တဈဦးနှငျ့ တဈဦး ပူးကပျမနဘေဲ ခပျခှာခှာနရေနျ လိုကျလံ သတိပေးနသေညျ ကို တှရေ့စဉျ။ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး မိတ်တီလာမွို့နယျမှာCovid19 ရောဂါကာကှယျရေး … Read more
ချစ်သူက ဖူးဖူးမှုတ်ချစ်မှန်းသိလို့ ဆိုးနေတဲ့ကောင်မလေးတွေမှာ ဒီလိုအချက် (၅) ချက်ရှိပါတယ်…
ချစ်သူက ဖူးဖူးမှုတ်ချစ်မှန်းသိလို့ ဆိုးနေတဲ့ကောင်မလေးတွေမှာ ဒီလိုအချက် (၅) ချက်ရှိပါတယ် မိန်းကလေးတွေဟာ ပင်ကိုယ်သဘာဝကိုက ဆိုးချင်နွဲ့ချင်၊ ချွဲချင်တဲ့သူတွေပါ။ ဒါကြောင့်မို့ပဲ ကိုယ့်ကိုဖူးဖူးမှုတ်တဲ့ ချစ်သူကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုရင် တမင်တကာ ဆိုးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်စရာကောင်းအောင်ပဲ ဆိုးတာပါနော်။ တစ်ခါတလေ အဆိုးလွန်သွားလို့ ချစ်သူကို ဝမ်းနည်းအောင်၊ စိတ်ဆိုးအောင် လုပ်မိတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြိတ်ပြီး အပြစ်တင်နေတတ်တာလည်း သူတို့ပါပဲ။ ချစ်သူက ဖူးဖူးမှုတ် ချစ်မှန်းသိလို့ ဆိုးနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေဆိုတာ ဒီလိုပါ။ (၁) ထစ်ခနဲ့ရှိ စိတ်ကောက် ချစ်သူက ဖူးဖူးမှုတ် ချစ်မှန်းသိလို့ တမင်ဆိုးနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေဆိုတာ ထစ်ခနဲရှိ စိတ်ကောက်တတ်တဲ့ သူလေးတွေပါ။ ချစ်သူက ကိုယ်ပြောသလိုမလုပ်၊ မနေပဲ နည်းနည်းလေး ချွတ်ချော်သွားတာနဲ့ ချက်ချင်းစိတ်ကောက်တတ်တဲ့ သူလေးတွေပါ။ ကိုယ်ကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တောင် လက်မခံပဲအတင်းစိတ်ကောက်နေတာမျိုးပါ။ … Read more
ကားအသစ် ဝယ်တော့ မှာလား တိတ်တိတ်နေပါရာထူးတိုးတော့မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ ( ကောင်းလွန်းလို့ဖတ်ကြည့်ပါ )
December 29, 2020 by Achawlaymyar
ကားအသစ် ဝယ်တော့ မှာလား တိတ်တိတ်နေပါရာထူးတိုးတော့မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ ( ကောင်းလွန်းလို့ဖတ်ကြည့်ပါ ) အိမ်ဝယ်တော့ မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ။ကားအသစ် ဝယ်တော့ မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ။အိမ်ထောင်ပြုတော့ မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ။ အပန်းဖြေခရီးထွက်တော့ မှာလား၊ တိတ်တိတ်နေပါ။ကျောင်းတက်တော့ မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ။ရာထူးတိုးတော့ မှာလားတိတ်တိတ်နေပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ အကောင်အထည် ပေါ်လုပေါ်ခင် အချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်အကျိုး မလိုလားတဲ့ မိတ်ဆွေတုတွေကို သွားပြောမိတဲ့အတွက် မျှော်လင့်ထားတာတွေ ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ ‘မိတ်ဆွေပါ’ ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ထက်သာ မနာလိုသူတွေရဲ့ ကွက်ကျော်ရိုက်မှု၊ ကုလားဖန်ထိုးမှုကြောင့် ရည်မှန်းချက် အိပ်မက်တွေကို လက်တစ်ကမ်း အလိုလောက်မှာ လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးပါ၊မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း အများစုဟာ သင်အခြေအနေ ကောင်းတာကို မြင်ချင်ကြပေမယ့် သူတို့ထက် သာသွားမှာကိုတော့ … Read more
လောကမှာ ဘယ်တော့မှကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့လူတန်းစားဆိုတာရှိတယ်ကိုယ်က ကိုယ့်မှာရှိတဲ့၅၀၀၀အကုန်ပေးခဲ့တယ် ဒါပေမယ့်သူဌေးတစ်ယောက် ၁သောင်းပေးတာကိုကျေးဇူးတင်မဆုံးဘူးအဲ့လိုလူတန်းစားကိုယ်ပေးခဲ့တဲ့ ၅၀၀၀ဟာနောက်နေ့အတွက်သုံးစရာမရှိတော့တာတောင် ရှိတာအကုန်ပေးခဲ့ပေမယ့်သူဌေးပေးခဲ့တဲ့ ၁သောင်းဟာမုန်ဖိုးသာသာပဲရှိတာ သူမသိခဲ့ဘူးသိလည်း သိပ်မခံစားတတ်တဲ့လူစားမျိုး ကိုယ်ပေးခဲ့တဲ့ အချိန်ဟာမအားမလပ်တဲ့ကြားက အပြေးအလွှားသွားရတာဖြစ်ပြီးသူများတွေပေးတဲ့အချိန်ဟာသူတို့အလုပ်ချိန်တွေ သင်တန်းတွေမိသားစုကိစ္စတွေအားလုံးပြီးမှ ပေးကြတာဖြစ်တယ် ဒါပေမယ့် ပိုအချိန်ပေးတဲ့သူကိုသာကျေးဇူးတင်ကြတယ်အခက်အခဲတွေကြားက လာရတဲ့သူကိုအသိအမှတ်မပြုကြဘူးဒီလိုပါပဲလူတချို့မှာ တစုံတယောက်ကိုဘာလုပ်လုပ်သိပ်ကျေးဇူးတင် သိပ်ချီးမွမ်းကြပြီး နောက်လူတစ်ယောက်ကိုတော့ဘာလုပ်လုပ်ကျေးဇူးတင်လေ့မရှိစာရင်းထဲသိပ်ထည့်လေ့မရှိတဲ့စရိုက်မျိုးတွေရှိတတ်ကြပါတယ်ပေးဆပ်ထားတဲ့ပမာဏကိုသာဆုံးဖြတ်ကြပြီး အားစိုက်ရတဲ့ပမာဏကိုတော့သိပ်မမြင်ကြပါဘူး ထည့်တွက်လေ့မရှိပါဘူးကိုယ့်ရှေ့မှာကိုယ့်ကိုနှိမ်ချင်တာနဲ့ကိုယ့်ထက်ပိုအဆင်ပြေသူတွေရာထူးပိုကြီးသူတွေနာမည်ပိုကြီးသူတွေအကြောင်း ရေပက်မဝင်ပြောဆိုကြပြီးသူတို့အဖို့ ကိုယ်မရှိလည်းရတယ်ကိုယ်မပါလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကိုပါးနပ်စွာပြကြပါတယ် ဟုတ်ကဲ့…မိတ်ဆွေသင့်တန်ဖိုးဟာ နည်းသည်ဖြစ်စေ များသည်ဖြစ်စေအဲဒီတန်ဖိုးကို အသိအမှတ်မပြုတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုသင့်မှာရှိနေပြီဆိုရင်တော့ အရင်လိုပေါပေါပဲပဲကူညီနေတာတွေအားအားယားယား အချိန်ပေးနေတာတွေနှစ်နှစ်ကာကာ ခင်မင်နေတာတွေကိုလျှော့လိုက်ပါဘာလုပ်မလဲ ကိုယ်ရှိနေခြင်းကိုတန်ဖိုးမထားကိုယ့်လုပ်အားတွေကို မလေးစားကိုယ့်အချိန်တွေကို အသိအမှတ်မပြုတဲ့သူတွေကိုစိတ်ထဲထည့်ပြီး ခင်မင်နေရတာမိတ်ဆွေရင်းလို့သက်မှတ်ပြီးပေါင်းသင်းနေရတာ.. ရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုထပ်မချပါနဲ့ကိုယ်မရှိလည်း အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကို ထားခဲ့လိုက်ပါ..ကိုယ့်ကိုမလိုဘူးဆိုတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျောခိုင်းခဲ့ပါ… ကိုယ်မရှိမှကိုယ့်တန်ဖိုးသိမယ့် မိတ်ဆွေတွေကိုလက်တွဲဖြုတ်ခဲ့ပါ..ဘဝမှာနေရမယ့်အချိန်အရမ်းနည်းတာမို့သင့်ကိုလိုအပ်တဲ့သင့်တန်ဖိုးကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့သင်ရှိနေဖို့လိုအပ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာသာသင်ရှိနေသင့်တာပေါ့… ‘အမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်း’တတ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေ’ငါးစိမ်းမြင် ငါးကင်ပစ်’တတ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေသူတို့တွေကို မျက်နှာလုပ်ပြီးနေရမယိ့အစားသင့်ကိုတန်ဖိုးထားလေးစားတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာပဲ ရှင်သန်သင့်တယ် ဒါ့ကြောင့်အခုပဲ သူတို့ကိုထားခဲ့လိုက္ပါ Credit to original writer unicode … Read more
စိတျကနျြးမာရေးမကောငျးပမေဲ့ မွေးလေးဖွဈသူကို ငှေ (၇၀၀၀)ကပျြ တညျးနဲ့ ရှငျပွုပေးခဲ့တဲ့ အဖှား သားယောကျကြားလေးတှေ မှေးဖှားထားကွတဲ့ အမတှေေ အဘှားတှအေတှကျ သူတို့ကို ရှငျပွုရဟနျးခံပေးလိုကွပါတယျ….ဒါပမေဲ့ တခြို့က မတတျနိုငျတာကွောငျ့ ရှိတဲ့ပိုကျဆံလေးတှေ စုပွီး တဈနကေ့ရြငျ ငါ့သား ငါ့မွေးကို ရှငျပွုပေးရမယျဆိုတဲ့ မိဘတှေ အဘိုးအဘှားတှေ ရှိပါတယျ… ခုဖျောပွခငျြတာက လကျထဲမှာ ပိုကျဆံ ၇၀၀၀ တညျးသာရှိပမေဲ့ ခဈြရတဲ့ မွေးလေးကို အဲဒီ မရှိမဲ့ရှိမဲ့ ငှလေေးနဲ့ ရှငျပွုပေးခဲ့တဲ့ အဘှားတဈယောကျရဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာအကွောငျးလေးဖွဈပါတယျ… တောငျငူမွို့နယျ၊ ကငျးဆိပျအုပျစု ၊ ဖိုးနီဆိပျကြေးရှာမှာအသကျ ၅၇ နှဈအရှယျ ဒျေါစိနျတငျ့ ဆိုတဲ့ မုဆိုးမတဈယောကျက မွေးဖွဈသူလေးကို ငှကေပျြ ၇၀ဝ၀ နဲ့အတူ သင်ျကနျး ၁ စုံ၊ ပုတီး ၁ … Read more
၂၀၂၁ တနှစ်လုံးမှာ သင့်အတွက် သင့်မိသားစု အတွက် ကံကောင်းခြင်း အေးချမ်းခြင်း ဖြစ်စေဖို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေ အတွက်ပါ….
၇ရက်သားသမီးများအတွက်🙏🙏🙏 ယခုလာမည့် 2021 နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့၏ ထူးခြားချက်ဒီဇင်ဘာလအကုန် New Year အစ အင်္ဂလိပ်နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ 1.1 2021 နေ့ဟာ သောကြာနေ့ကျပါသည်။ သောကြာဆိုတာ အအေးဓာတ်ကိုဆောင်ပါတယ်။ အေးချမ်း တိတ်ဆိတ်ခြင်းကို လိုလားတဲ့ အကောင်လေးပါ👍 ၂၀၂၁ ရဲ့ တနှစ်တာလုံးဟာ လူသားအားလုံးအတွက် အေးချမ်း အောင်မြင်မှုတွေ ပြည့်မယ်ဆိုတဲ့ နမိတ်လဲဖြစ်ပါတယ်အဲနေ့ဟာ သောကြာနေ့ဖြစ်သလို ရက်ရာဇာလဲ ကျပါတယ်။ ၂၀၂၁ တနှစ်လုံးမှာ သင့်အတွက် သင့်မိသားစု အတွက် ကံကောင်းခြင်း အေးချမ်းခြင်း ဖြစ်စေဖို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေ အတွက်ပါ ၉ နဝင်း ယတြာလေးပါပဲ January လ ၁ရက် သောကြာနေ့ အဲနေ့မနက် ၅နာရီမှ ၉ နာရီတိတိ အချိန်မှာ မိမိအိမ်က ဘုရားကျောင်းဆောင် … Read more
ချစ်သူတွေကြားမှာ မသုံးသင့်တဲ့ စကားလုံးများ…
ချစ်သူတွေကြားမှာ မသုံးသင့်တဲ့ စကားလုံးများ.. စကားလုံးတွေကြောင့် ကြည်နူးပျော်ရွှင်ရသလို တစ်ခါတစ်လေမှာ စကားလုံးတွေကြောင့်ပဲ နာကျင်ရပါတယ်။ ကိုယ်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ ချစ်သူလေးကို ကိုယ့်ရဲ့ စကားလေးတွေကြောင့် နာကျင်သွားရမယ်ဆိုရင်တော့ မကောင်းပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်မှာ ကိုယ်ချစ်သူအပေါ် မပြောသင့်တဲ့ စကားတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) စိတ်ပျက်တယ် စိတ်ပျက်တယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ပြောတဲ့သူအတွက်တော့ အများကြီးမသိသာပေမယ့် အပြောခံလိုက်ရသူရဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ အတွေးမျိုးစုံဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်သူက ကိုယ်ကိုဘာကြောင့်စိတ်ပျက်တာလဲ မချစ်တော့လို့လား အချစ်သစ်တွေ့နေလို့လား ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကြောင့် စိတ်ပျက်လာတာလား လမ်းခွဲချင်လို့လား စသည်ဖြင့် ခံစားချက်ပေါင်းစုံနဲ့ အတွေးများဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ချစ်သူကိုဘယ်လောက်ပဲစိတ်ဆိုးပါစေ စိတ်ပျက်တယ်ဆိုတဲ့စကားတော့ မပြောသင့်ပါဘူး။ (၂) ပျင်းလာပြီ ချစ်သူစုံတွဲတွေကြားမှာမသုံးသင့်တဲ့ နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုက ငါမင်းနဲ့တွဲရတာပျင်းလာပြီဆိုတဲ့စကားပါ။ ကိုယ်ချစ်သူကို အပျော်အပျက်အနေနဲ့တောင် စနောက်ပြီး မင်းနဲ့တွဲတာပျင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတော့ မသုံးသင့်ပါဘူး။ ချစ်သူတိုင်းကတော့ ကိုယ်ချစ်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားချင်ကြပါတယ်။ အချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့ တက်နိုင်သလောက်ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေပေးနေပေမယ့် … Read more
အချစ်ကြီးလွန်းတဲ့ကောင်မလေးတွေမှာ ဒီလိုမျိုးအကျင့်လေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်
အချစ်ကြီးလွန်းတဲ့ကောင်မလေးတွေမှာ ဒီလိုမျိုးအကျင့်လေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ် မိန်းကလေးတွေမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း အကျင့်လေးတွေ ရှိတတ် ကြပါတယ်။ ဒါကို သင်သိသွားရင်တော့ သူတို့ကို ကိုယ်ချင်းစာပြီး သနားကြင်နာ လာလိမ့် မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်နော် ။ (၁) အသံပြဲကြီးနဲ့ အော်ငိုတာ” တစ်ခါတလေ သူက တိတ်တိတ်လေး ခံစားနေတဲ့ ရာကို သင်က သွားပြီး ကြင်နာပြလိုက်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နားမလည်ပေးရင် ပဲဖြစ်ဖြစ် အသံပြဲကြီးနဲ့ အော် ငိုတတ် ကြပါတယ် ။ သင်နားလည်ပေး ရမှာက သူတို့ရင်နဲ့မဆန့်အောင် ခံစား ရတာတွေ များလွန်းတာကြောင့် ဆိုတာကိုပါ ။ အဲလို အချိန်မှာ သူ့ကို စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့ချော့ပေး လို က်ပါ။ အဓိကက သင့်ဆီက နွေးထွေးမှုနဲ့ နှစ်သိမ့်မှုတွေကို … Read more
သင့်ကို အရမ်းတန်ဖိုးထားပြီး ဘယ်တော့မှ သစ္စာမပျက်ဘူးဆိုတာ ဖော်ပြနေတဲ့ အချက်များ
သင့်ကို အရမ်းတန်ဖိုးထားပြီး ဘယ်တော့မှ သစ္စာမပျက်ဘူးဆိုတာ ဖော်ပြနေတဲ့ အချက်များ အချစ်ရေး ကံကောင်းတဲ့ဖို့ဆိုတာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဆုတောင်းရုံနဲ့ ပြည့်ချင်မှလည်း ပြည့်မှာပါ။ ဒီလို ချစ်သူမျိုးကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ဆုတောင်းစရာမလိုပဲကို အချစ်ရေး ကံကောင်းသူတစ်ယောက်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်နော်။ သင်ရဲ့ ချစ်သူက သင့်အပေါ် တန်ဖိုးထား ချစ်ခင်တယ်ဆိုတာ ဒီအချက်တွေနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။ သင့်အတွက် အမြဲစဉ်းစားပေးတတ်တယ် ချစ်သူအချင်းချင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုရှိရှိ ချစ်ပေးဖို့ဆိုရင် တစ်ယောက်အတွက် တစ်ယောက်က ထည့်စဉ်းစားပေးတတ်ရပါမယ်။ ကိုယ့်အဆင်ပြေမှုတစ်ခုတည်းကိုပဲ မကြည့်ပဲ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် စဉ်းစားပေးတာမျိုးပေါ့။ သင့်ချစ်သူက သင့်အတွက် အမြဲတမ်း စဉ်းစားပေးတတ်တယ်၊ သင်အဆင်ပြေအောင် အမြဲတမ်း ထည့်တွေးပေးတတ်ရင်တော့ သူဟာ သင့်အပေါ် တကယ်အလေးအနက်ထားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကို အံ့သြသွားအောင် အမြဲလုပ်နိုင်တယ်။ သူ့ရဲ့ … Read more